SaseTomsk - kangaki ungezwa igama lo muzi. Nokho, abantu abaningi abakaze baye lapha. Noma kunjalo, kuwufanele ngokuvakashela, njengoba ekhona eziningi izinto ezithakazelisayo. Ngempela, eMoscow - saseTomsk akuyona endaweni ethandwa ngenxa yezizathu eziningi. Okokuqala, le mizi emibili zitholakala ngempela ngandawonye. Okwesibili, abaningi yalo mzila kungenzeka kubonakale ungakujabulisi, kodwa lokhu akulona iqiniso. Lesi sihloko Bayokhuluma kungani kumele uye saseTomsk, kungenzeka ukubona kuleli dolobha, futhi uyophinde abe indaba encane ukuthuthukiswa ezinhle nangomlando.
A amancane edolobheni isici
SaseTomsk - sekuyinto idolobha elikhulu okwamanje. Kuyinto central city endaweni kanye ndawo. Kuyaphawuleka ukuthi lena akuyona nje edolobheni abajwayelekile, kodwa isikhungo zangempela yezesayensi nasezinzuzweni ngobukhulu sezemfundo, esemgwaqweni ensimini ka eSiberia. Kukhona izikhungo eziningi evulekile yesayensi ezisebenza kulesi sikhathi samanje.
Ngokuqondene labantu, saseTomsk ayikahlanganiswa afakwe ohlwini yamadolobha. Nokho, bakhona yini incane kakhulu, ngo-2016 izibalo wabonisa ukuthi emzini kukhona angaba yizinkulungwane 560. Man.
Kukhona esinye isizathu esihle kungani ukuvakashela leli dolobha - ligcwele nge ezikhumbuzo eziningi ezinhle namasiko, futhi ikakhulukazi izakhiwo ngokhuni netshe izakhiwo. Ngokuvamile, lezi izinto eziqondene namasiko uvele isikhathi esisukela XVIII kuya XX eminyaka.
Kuyinto ikakhulukazi ezithakazelisayo ukuthi saseTomsk nedlelo layo ndawonye bakha ukwakheka engavamile - saseTomsk dolobha eliminyene elinabantu, okuzoxoxwa kamuva. SaseTomsk - Ngakho, izizathu ezimbalwa ukuthi kuyoba mnandi ukulandela umzila Moscow wadluliswa. Nokho, ibanga eliphakathi kwale mizi, kuyinto ehluke ehloniphekile. Kuyinto 3610 amakhilomitha.
Indawo nesimo sezulu edolobheni
Okokuqala, ake sixoxe lapho saseTomsk. Idolobhana Itholakala West laseSiberia Plain, okuyinto kakhulu inquma sezulu kunalokho ezinzima kule ndawo. Idorobha loke nje ngebhange kwesokudla eMfuleni Tom. Ngokuthakazelisayo, budebuduze edolobheni ngulona logeleta eMfuleni ob. Lapha ihlathi Boreal, okubandakanya iningi ehlathini bog ndawo. Futhi, ihlathi njalo. Nature lapha ithakazelisa kakhulu, ikakhulukazi kulabo abaye ayikaze ehlathini. Yingakho i-eziningi kuyoba kakhulu ukuhamba emzileni eMoscow - saseTomsk.
Njengoba sekushiwo, isimo sezulu lapha ngempela ezisindayo, ikakhulukazi nabantu abangasithandi ejwayele ke. Isimo sezulu sendawo - isishingishane ezwekazini. Sici Its sici - kungcono ebusika eside futhi kanzima, okuyinto Uthatha isikhathi esiningi sonyaka. Izinkathi zonyaka ziyashintsha ngokushesha okukhulu, kodwa ngokuvamile kukhona ukubuya frost futhi ncibilika. Amazinga isilinganiso ngoJanuwari - lokususa 17.1 C ngo-July - 18.7 C. Yiqiniso, njengoba kwezinye izindawo, ngezinye izikhathi emzini elotshiwe ngezinsuku ezibandayo ngokungavamile noma kushisa, kodwa kungenzeki njalo.
Abantu abaningi banesithakazelo kulokho umkhawulo wesikhathi lingumuzi saseTomsk. Ikakhulukazi lo mbuzo uthatha labo abafuna ukuhamba emzileni eMoscow - saseTomsk. Isikhathi umehluko Yiqiniso, kuyinto, futhi nginamandla. SaseTomsk sise ibanga elithileko kusuka eMoscow ngasempumalanga, ngakho izingxenye isikhathi emzini - ezahlukene. emizini isikhathi kuyahluka amahora angu-3. Okungukuthi, ngokwesibonelo, lapho eMoscow ngo-12 ezimpondweni ekuseni ke e saseTomsk kakade 3:00 am nokunye. Moscow ungaphakathi umkhawuko wesikhathi UTC + 3, saseTomsk, esikhundleni salokho, esikhathini zone zone UTC + 6. Ngakho, kwakubhekwa umehluko isikhathi kanye zone isikhathi la madolobha amabili.
SaseTomsk agglomeration - kuyini?
Njengoba kushiwo ngenhla, endaweni kwakhiwa inhlangano ezithakazelisayo, okwakubizwa ngokuthi i saseTomsk agglomeration. Okokuqala nje, yebo, kudingekile ukuchaza nomqondo agglomeration. Le nqubo manje eyenzekayo cishe kuyo yonke indawo. Agglomeration - kuyinto ekuqongeleleni ezithile ezindaweni ezihlukahlukene ukuthi kancane kancane bakha inhlangano eyodwa. Lokhu kwenzeke ne saseTomsk nasemazweni angomakhelwane nemizana, okuhlanganisa izifunda eziningana ezisemadolobheni - saseTomsk futhi Seversk, saseTomsk futhi endaweni suburban. Kazi kukhona izinzuzo ebunganini obufanayo? Impendulo ulula: ngokuyisisekelo kuba inzuzo yomphakathi kanye nomnotho ngenxa emakamu endaweni eyodwa kuzo zonke izimboni kanye namabhizinisi amakhulu.
Amasiko ezikhangayo yedolobha
Ngokosiko, saseTomsk ngokuphawulekayo athuthukile. Kukhona nenqwaba izinhlangano zamasiko izinhlangano ezisebenza ngempumelelo namuhla. Ngakho-ke, uma uhamba emzileni eMoscow - saseTomsk, qiniseka ukuba banake ezihlukahlukene lezinto zamasiko ezikhona kuleli dolobha. Kukhona evulekile 3 yaseshashalazini ngokushesha esaziwa okukhulu, yaseshashalazini zezingane yaseshashalazini eziningana unodoli. Abathanda umculo Philharmonic izenzo lapha, okubandakanya encane, igumbi elisondelene, futhi, kakhulu kuyathakazelisa, ihholo isitho.
SaseTomsk futhi ayiphelele ngaphandle iminyuziyamu. Kukhona abaningana, isibonelo, ngobukhulu - Umlando wendawo, okuyinto kufanele avakashele kubo bonke izivakashi. Kukhona Art Museum, nemipheme ahlukahlukene. Sinesithakazelo ngokukhethekile yilona saseTomsk Museum of Architecture Ngokhuni.
Ngaphezu kwalezi zakhiwo, e saseTomsk, kukhona ezikhumbuzo eminingi yezakhiwo. Izitayela ezivamile lapha - lokhu izakhiwo Russian sokhuni, eSiberia baraque (okuyinto ngokuvamile libhekisela nesimo sesakhiwo esikhulu amathempeli), yesimanje kanye classicism. Kumasayithi edume kunazo yezakhiwo kungaba isakhiwo avelele District Court, i-House of Science, Exchange icala nabanye abaningi.
Moscow - saseTomsk: kanjani ukuba uthole
Isikhathi esining impela ukuvakashela saseTomsk, nawu umbuzo, ingabe uthole indlela lapho kusuka eMoscow. Kunezindlela eziningana ezahlukene ukuthi ungathola kulo muzi emangalisayo. Inketho yokuqala - ukuba bathathe uhambo ngemoto. Lena inketho kuhle ukuhamba emzileni eMoscow - saseTomsk. Ibanga emshinini imayelana 3604 amakhilomitha. Lolu hambo Kuzothatha izinsuku eziningana, kodwa indlela kuyoba mnandi kakhulu, ngoba egcina kwamanye amadolobha amaningi.
Indlela yesibili, okuyinto isheshe kuyalinqoba umzila Moscow - saseTomsk - indiza. Ukundiza sithatha amahora 4-5 kuphela.
Kunesizathu sesithathu inketho - ukuya ngesitimela kusukela eKursk sesitimela. Lolu hambo uthatha kancane kuka kwezinsuku ezimbili.
Ivanovo amachibi (Khakassia) - iparele Russia
Lezi izinkambo uyonika izinkumbulo ongenakulibaleka. Qiniseka ukuvakashela kulezi zindawo
I ukuzilibazisa isikhungo "ensimini eluhlaza", Sifundazwe: incazelo kanye nokubuyekeza
Amazing Bulgaria: ukubuyekezwa. Sozopol futhi izintelezi yayo
Bulgaria ngoJuni: yini noma cha ukuya?
Elikhulu w / kwenhlekelele Spain Julayi 24, 2013
I-Tablet "I-Nexus 7": Uhlolojikelele, Ukucaciswa, izibuyekezo, izithombe
Nokwaneliswa - yisifiso sokuba wedwa noma ubalekele ukubhekana namaqiniso?
Umlingisi uVladimir Kostin: izithombe, biography, empilweni yakho